Ny foto-kevitry ny sekoly Montessori sy ny fialam-boly Montessori
Sekoly Montessori | Fampianarana amin'ny sekoly
Mianatra amin'ny heviny rehetra - ny fahatsapana 1000 ao Montessori
Sekoly Montessori sy toeram-pambolena any Alemana
"Ampio aho hanao izany ho ahy", ny foto-kevitr'i Montessori - Ny fandaharam-pianarana Montessori dia niverina tany amin'ny mpanampy sy ny dokotera Maria Montessori. Ity teratany 1870 ity dia teraka tany Italia ary tonga avy any an-dakilasy tsara toerana.
The concept of Montessori
Kristiana nobeazina sy nandeha tsara, dia nanolo-tena manokana ny zon'ny vehivavy sy ny zon'olombelona. Niasa tamina toeram-pitsaboana niaraka tamin'ny ankizy niharan'ny sembana izy, saingy hitany fa vonona ny hianatra sy handray tsara izy ireo saingy tsy nahitana ny hevitra marina.
Ny Maria Montessori dia namolavola fitaovana azo tsapain-tanana ho an'ireo ankizy ireo mba hanampy ireo ankizy hivoatra. Mifototra amin'izany ny fanabeazana ny pedagojia Montessori nandritra ny taona maro. Ny hevitra fototra momba ny pedagojia iray manontolo dia ilay fitsipika mitarika fanta-daza: Ampio aho hanao izany!
Inona no ao ambadiky ny fianarana an'i Montessori?
Ny pedagojia Montessori dia mametraka ilay zaza eo afovoan'ny fanabeazana, ilay zaza dia mpanorina ny tenany ary ny antony manosika azy amin'ny endrika valisoa sy sazy dia tsy ilaina mihitsy. Ny ankizy, araka ny filazan'ny mpanaraka an'i Montessori, dia te-hianatra amin'ny tenany manokana ary tokony ho tony ao anatiny, satria ny hevitra hoe hampidirina ao anatin'ny tontolo olon-dehibe dia tena manan-kery.
Mifototra amin'ireo hevitra ireo, mampianatra asa malalaka malalaka sy fianarana misokatra ny sekoly Montessori. Ny lesona dia manome ny efitrano fianarana ho an'ny ankizy ary mahazo traikefa. Ny ankizy miaraka amin'ny talentany dia eo ampelatanany, mamaritra ny dingam-pianarany izy ary mivoatra amin'ny feony manokana. Ampianarina hanahaka ny zava-drehetra kosa izy io.
Ohatra, ao amin'ny toeram-pardinan'ny Montessori, ny ankizy dia mandrisika ny hametraka ny latabatra amin'ny fijerena miverimberina sy miverimberina ary miezaka manampy ny tenany.
Ny Montessori ankizy fampandrosoana nozarainy ho dingana telo. Ny dingana voalohany amin'ny fahazazana (0-6 taona), mbola kely ny dingana faharoa (8-12 taona) Lasa Tanora (12-18 taona). Rehetra dingana telo ny saina anjara lehibe, satria ankizy mikasi-raiki-tampisaka faniriana hanandrana ny zava-drehetra sy ny manimbolo.
Ny fahatakarana amin'ny heviny ara-bakiteny dia hevi-dehibe ao amin'ny sekolin'i Montessori sy ny zana-pokontany. Ny fianarana dia tsara indrindra atao amin'ny alalan'ny fahatsapana fa tsy ny abitra, noho izany dia ho tsara kokoa ny fianarana, hoy ny mpisolovava. Tamin'ny alalan'io fanamafisana io, dia nanokatra ny fitaovana fianarana manokana. Amin'ny matematika, ohatra, pearl necklaces dia ampiasaina mba hahatonga ny isa azo hazava, izany hoe azo tsapain-tanana. Ny endriky ny perla amin'ny endriky ny 1000 dia mampiseho tarehimarika ambony kokoa ary mamela ny ankizy hieritreritra tsara kokoa ny lanjany - tsy eo amin'ny loha, fa mahatsapa ihany koa.
Any Alemana, manodidina ny toby fitsaboana 600 dia miasa arakaraky ny hevitr'i Maria Montessori. Tany am-piandohan'ny 2013 dia nisy sekoly ambaratonga fototra 225 sy sekoly ambaratonga faharoa 156 izay manaraka ireo fitsipika ireo. Ny sekoly dia tena manan-tany manokana ary mametraka ny fivoaran'ilay zaza eo afovoan'ny tanjona.
Ny ankamaroan'ny mpitsikera dia mahita ny fifindrana avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra Montessori mankany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Na izany aza, efa naseho tamin'ny lasa fa tsy misy olana ny ankizy. Ny zavatra ao amin'ny fandaharam-pampianarana dia tsy mitovy amin'ny an'ny sekoly mahazatra, saingy ny làlana dia tena zava-dehibe, ahoana no ianaran'ny ankizy izany votoaty izany.
Asa malalaka, safidy amin'ny mpiara-miasa, vondrona asa, fampianarana misokatra miaraka amin'ny fahafahana maro ho an'ny hetsika, ny fotoana manokana dia ny sasany amin'ireo lafiny izay miditra amin'ny lisea ao Montessori. Farany, ny zaza dia mandray soa avy amin'ireo fepetra ireo satria mianatra miasa tsy miankina.
Sekoly Waldorf | Fampianarana amin'ny sekoly
Aiza avy ny isa avy aminay? Fampianarana amin'ny sekoly
Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny kindergarten sy ny sekoly sakafo
Fiovan'ny toeram-piantsonana any am-pianarana
Ny safidin'ny sekoly
Torohevitra ho an'ny sekoly am-pianarana
Buy Satchels | am-pianarana
Pejy fanolorana pejy
Pejy fanolorana pejy - mpianatra zazakely
Mpianatra mpampianatra sekolin'ny pejy
Fitaovana fiara fitaterana an-tsekoly fiara